आममतदाताको अहिले प्रमुख दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यसैले सुधारका निम्ति अहिल्यैदेखि थालनी गर्नु आवश्यक छ। त्यो सुधार भनेको आगामी निर्वाचनमा उठाइने उम्मेदवारको चयनमा पनि निर्भर गर्छ। सरकारमा जान जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने भन्दा पनि काममा ध्यान दिने प्रवृत्ति आवश्यक छ।
नागरिक २ जेष्ठ २०७९ सोमबार ५ मिनेट पाठ
औपचारिक रूपमा ४० घन्टा काम गर्ने हो भने पनि आम रूपमा सार्वजनिक कार्यालयमा कामको संस्कृति छैन। खाजा, चिया, जाडो, गर्मी अनेकन बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन। कामको संस्कृति नभएको यो मुलुकमा यसरी दिइने बिदाले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउनेछ।
नागरिक १ जेष्ठ २०७९ आइतबार ५ मिनेट पाठ
स्थानीय तह सशक्त हुँदा त्यहीँ आमनागरिकले सुविधा पाउन सम्भव हुन्छ। त्यसका निम्ति इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई विजयी गराउने महानतम कार्यमा आममतदाताले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
नागरिक ३० वैशाख २०७९ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनअघि मतपत्र छपाइ गर्न भनेर छापा मेसिन खरिद गरे पनि अहिले प्रयोग गरिएन। त्यो मेसिन अहिले प्रयोग नगर्नुको कारण के होला? राज्यले एकपटक गरिसकेको बजेट खर्चको सदुपयोग नगरेर चुनावैपिच्छे लागत बढाउने काम मात्र आयोगबाट किन भइरहेको छ ?
नागरिक २९ वैशाख २०७९ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
मौन अवधिको मौनता
मौन अवधिलाई एउटा ध्यानको अवस्थाजस्तो बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। यसको पालना राम्ररी हुन सक्यो भने अन्तिम अवस्थाको चलखेल अन्त्य हुन्छ। विगतमा पनि निर्वाचनका बेला यही अवधिमा धेरै किनबेच भएको सुनिएको छ। त्यसैकारण परिणाम पनि अनपेक्षित हुन्छ।
मतदान अर्थात अभिमतको दान
विगतमा स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिले तलबभत्ता पाउँदैनथे, यो शुद्ध सेवाको विषय जस्तो थियो। आज राजनीति पेसाका रूपमा विकास भएको छ। त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत तलबभत्ता पाउँछन्। त्यसले पनि अहिले स्थानीय तहमा आकर्षण बढाएको छ।
महिला खोजी–खोजी पुरुष रोजी–रोजी
कोभिड–१९ व्यवस्थापनको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरिएको एक अध्ययनमा जहाँजहाँ महिला राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख छन्, त्यहाँत्यहाँ राम्रो काम भएको थियो। महिलाहरूले व्यवस्थापकीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका थिए। यस हिसाबले पनि स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनैपर्ने अवस्था छ।
नागरिक २६ वैशाख २०७९ सोमबार ४ मिनेट पाठ
केन्द्रीकृत विकासको परिणाम
मुम्बई, कोलकाता वा हैदरावाद बस्ने भारतीयलाई नयाँ दिल्ली नै जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, उद्यम लगायत सम्पूर्ण कुरामा राजधानी जानुको विकल्प छैन।
नागरिक २५ वैशाख २०७९ आइतबार ५ मिनेट पाठ
सामाजिक सुरक्षा कि देशको संकट?
एकातिर, मुलुकको जनसंख्या विस्तारै वृद्धावस्थातिर जाँदैछ। अर्कोतिर, नेपालीको सरदर आयु पनि बढिरहेको छ। यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च भविष्यमा धान्ने नसक्ने हुन सक्छ।
नागरिक २३ वैशाख २०७९ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
अति राजनीतीकरणले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पार्न थालेको छ।
नागरिक २२ वैशाख २०७९ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
जलवायु परिवर्तनको पिरलो
विज्ञले भारत र पाकिस्तानमा इतिहासमै पहिलोपटक तातो हावाकोे कहर सर्वाधिक देखिएको र यसले मानव स्वास्थ्य तथा जीवन यापनलाई समेत प्रभावित पारेको बताएका छन्।
नागरिक २१ वैशाख २०७९ बुधबार ४ मिनेट पाठ
प्रेस कति स्वतन्त्र?
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘ट्रोल’ ले पत्रकारलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ। पत्रकार निरुत्साहित भएको खण्डमा त्यसले अन्ततः आमनागरिकको बोल्ने अधिकारलाई खण्डित मात्रै तुल्याउँदैन, दमनकारी व्यक्ति शासनसत्तामा आए भने तिनले बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन्।
नागरिक २० वैशाख २०७९ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
विशेष गरी सत्तारुढ दलले गठबन्धन गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार कम गरेका हुन्। महिला उम्मेदवार बढी दिनेमा भने नेकपा (एमाले) अगाडि रहेको छ। राजनीतिक तालमेल गर्ने क्रममा महिला उम्मेदवार घटाइएको छ। त्यसैले तालमेल पनि महिला विरोधी हुने रहेछ भन्ने स्थापित भएको छ।
नागरिक १९ वैशाख २०७९ सोमबार ५ मिनेट पाठ
अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
नागरिक १८ वैशाख २०७९ आइतबार ४ मिनेट पाठ
सत्ता दुरूपयोगविहीन निर्वाचन
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।
नागरिक १६ वैशाख २०७९ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
नातावादको दलदलमा नेताहरू
नेकपा (माओवादी अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहालले फेरि पनि चितवनमा मेयरको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएकी छन्।उनलाई दुई कार्यकाल मेयर बनाउँदा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय आधार समाप्त हुने स्थिति आइसकेको छ।
नागरिक १५ वैशाख २०७९ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
सुर्ती सेवनको खर्च ४० अर्ब
नेपालमा अकाल मृत्युको पहिलो कारक प्रदूषण हो भने दोस्रोमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थले नेपालमा कुल मृत्युको १९.४९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।
नागरिक १४ वैशाख २०७९ बुधबार ५ मिनेट पाठ
असल उम्मेदवारीको अपेक्षा
दलले जथाभावी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने र मतदाताले दलीय आधारमै मतदान गर्दा राम्रो परिणाम आएको छैन। असल उम्मेदवार नभए मत प्राप्त हुँदैन भन्ने दलहरूलाई लाग्नु आवश्यक छ।
नागरिक १३ वैशाख २०७९ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
काम नगर्ने ठेकेदारलाई मौकै–मौका
व्यवसाय गर्नु भनेकै जोखिम मोल्नु हो। लाभ र हानि व्यवसायका चरित्र हुन्। तर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू भने सधैं लाभ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा देखिन्छन् र त्यहीअनुरूपका व्यवहार गर्दै आएका छन्।
नागरिक १२ वैशाख २०७९ सोमबार ५ मिनेट पाठ
नागरिकका १४ वर्ष
देश राम्रो हुँदै गयो भने हामी सबैको स्थिति स्वतः राम्रो हुँदै जानेछ। नागरिक पनि देशका निम्ति थप योगदान गर्न परिपक्व हुँदै जानेछ। हाम्रो यो यात्रामा साथ दिनुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्छौ।
नागरिक ११ वैशाख २०७९ आइतबार ५ मिनेट पाठ
निर्वाचनपछि महिला नेतृत्व
महिला नेतृत्वको विकासले मात्र सुशासनमा देखिएको रिक्तता पूर्ति हुन सक्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म पुरुष नेतृत्व असफल भएको हो। त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्ने हो भने त्यसले नेतृत्वमा रहेको रिक्ततासमेत पूर्ति गर्ने देखिन्छ।
नागरिक ९ वैशाख २०७९ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिक जिम्मेवारी
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
नागरिक ८ वैशाख २०७९ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
काकाकुल काठमाडौंको मेलम्ची सपना
निराशा तथा अनिश्चिताका बीच वहुप्रतीक्षित मेलम्ची पानीले थोरै समयका लागि भएपनि राजधानीबासीको तिर्खा मेट्ने भएको छ। यो सुखद समाचार हो।
नागरिक ७ वैशाख २०७९ बुधबार ४ मिनेट पाठ
स्थानीय सरकारमा दलित पदाधिकारी
अरू समुदाय आर्थिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले मात्र पछि परेका छन्। दलित समुदायमाथि त सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारको समेत अभाव छ। त्यसकारण पनि समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य दलित समुदाय हुनुपर्छ।
नागरिक ६ वैशाख २०७९ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
सम्पादकीयबाट अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्